Fiteny Loharanom-pitaovana ho an'ny mpampianatra
Ity drafitry ny lesona amin'ny teny anglisy ity dia mitaky ny mpianatra hanomana fitsangantsanganana sy fitsangantsanganana mifototra amin'ny mombamomba ireo vondron'olona maro samihafa. Ny lesona dia manampy amin'ny fanamafisana ny voambolana mifandraika amin'ny dia . Hitako fa manampy amin'ny fampiasana gazety any an-toerana, indrindra ny gazety izay manome hetsika eo an-toerana. Ohatra, eto Portland, Oregon tiako ny mampiasa The Mercury na The Willamette Weekly. Ny ankamaroan'ny tanàna lehibe any Etazonia dia manana ireo gazety ireo maimaim-poana manerana ny tanàna.
Alefaso ary alao ny dika mitovy amin'ny gazety maimaimpoana vitsivitsy hampiasaina ao am-pianarana .
Ny lesona dia manomboka amin'ny mpianatra izay manapa-kevitra hoe iza avy ny tarika dia handeha hanao dia. Mifototra amin'ny karazan'olona izay mandehandeha, ny mpianatra dia mampiasa ny loharanon-kevitra hikaroka fijanonana fohy ao amin'ny tanàna iray na faritra iray manokana. Mazava ho azy, azonao atao ny misafidy ny hifantoka amin'ny toerana lavitra. Na izany aza, tiako ny mitazona izany eo an-toerana rehefa mahita ireo mpianatra fa tsy mahatsikaritra ireo fahafahana lehibe rehetra azo. Raha mampianatra teny Anglisy any amin'ny firenen-kafa ianao ary ireo mpianatra dia avy any amin'ny tanàna iray ihany, mety tsara ny manova izany ary mifantoka amin'ny fandehanana any ivelany.
Tanjona: Mamita ny asa atao amin'ny vondrona madinika mampiasa ny aterineto sy ireo loharano hafa azo ampiasaina amin'ny teny Anglisy, izay mamaritra ny toerana sy ny dia an-dàlana ary ny antsipiriany
Tetikasa: Manomana fitsangatsanganana fohy mankany amin'ny toerana iray mifototra amin'ny karazana mpizahantany
Amin'ny maha-mpianatra, ifanakalozy hevitra ny karazana toerana, drafitry ny fitsangatsanganana, sns. mety mety ho an'ireo karazana mpandeha ireo
Mpivady mariazy mariazy
Mpinamana roa izay manatrika ny oniversite
Amin'ny maha-mpianatra, ifanakalozy hevitra ny amin'ireo fitaovana azon'ny mpianatra ampiasaina mba hanaovana drafitr'asa. Manoro hevitra expedia.com sy orbitz.com aho, saingy misy maro hafa.
Raha misy, ampiasao ny tetikasa ary mandehana amin'ny fizotran'ny fitadiavana tapakilam-pifamoivoizana an-dalamby sy trano fandraisam-bahiny.
Ampiasao ny lisitra etsy ambany, afaho ireo mpianatra na vondrona kely na kely (4 isaky ny farafaharatsiny) manendry mpivoy ny vondrona tsirairay.
Asaivo manomana drafitra amin'ny antsipiriany ho an'ny vondrona tsirairay ny mpianatra.
Rehefa vita ny vondrona tsirairay, asaivo manolotra ny drafitr'izy ireo mankany amin'ny kilasy iray manontolo izy ireo.
Famaritana: Mba hanitarana ity asa atao ity dia angataho ny mpianatra hamorona fampisehoana mampiasa PowerPoint na fampiharana hafa mitovy amin'izany. Ny mpianatra dia tokony hahita sary ary manoratra ny lahatsoratry ny bullet ho an'ny tsirairay amin'ireo asa atao ao anatin'ilay fampisehoana .
Manaova fialantsasatra ho an'ny __________ ho an'ny vondrona Travel manaraka:
I Mary sy i Tim dia nanambady ary miorina amin'ny volom-borona lehibe mba hankalaza ny fitiavany mandrakizay. Ataovy azo antoka fa misy safidy amam-pihetseham-po sy sakafo mahasalama maro hanamarihana ity hetsika mahafinaritra ity.
Miara-manatrika ny oniversite i Alan sy Jeff ary mikasa ny hanana herinandro mahafinaritra sy mahafinaritra. Tia mandeha any amin'ny kliobana izy ireo ary manao fety mafy, saingy tsy manam-bola be ry zareo mihinana amin'ny trano fisakafoanana tsara.
Ny Andersons sy ny Smiths dia mpivady manana namana nandritra ny taona maro.
Mihalehibe ny zanany ary manana ny fianakaviany manokana. Ankehitriny, mahafinaritra ry zareo miara-misakafo ary mametraka lohahevitra maro amin'ny famangiana sehatra manan-kolontsaina. Tiany koa ny mandeha mandehandeha sy mihinana sakafo tsara.
Ireo mpandraharaha ara-barotra dia liana amin'ny fanokafana orinasa vaovao eo amin'ny toerana nofidianao. Mila mijery ny faritra izy ireo, mihaona amin'ny mpandraharaha eo an-toerana, ary miresaka momba ny tolo-keviny amin'ny governemanta ao an-toerana.
Fianakaviana miaraka amin'ny ankizy
Ny fianakaviana McCarthur dia manan-janaka telo, 2, 5 ary 10 taona. Tia mandany fotoana any ivelany izy ireo ary manana tetibola voafetra ho an'ny sakafo. Tsy liana amin'ny fialamboly izy ireo, fa ny ray aman-dreny kosa tia mampiditra ny ankizy ho an'ny tranombakoka manan-danja mba hanampy amin'ny fanabeazana kolontsaina.
Peter sy Dan
Nanambady taona vitsivitsy lasa izay i Peter sy Dan. Tian'izy ireo hijery ireo toera-ponenana mafana ao an-tanàn-dehibe izay alehany izy ireo, ary koa ireo fomba fijery nentim-paharazana mahazatra.
Izy ireo ihany koa ireo gourmets izay mandany 500 dolara amin'ny sakafo tsara, ka te-hankany amin'ny trano fisakafoanana iray faran'izay ambony indrindra izy ireo.
Fenoy ny fampahalalana mba hamenoana ny drafitry ny vakansy.
Firy isa ?:
Vehivavy fiara / eny?
Raha eny, vidio:
Fialantsasatra / Fialan-tsasatra ho an'ny andro:
Inona / aiza?
Ampio andro maromaro araka izay ilaina amin'ny drafitra fandaharam-pitaovanao.
Joba ho an'ny mpampianatra ESL any Etazonia
Sarimihetsika ho an'ny Mpianatra Anglisy
Ny Grammar dia mangataka amin'ny teny anglisy
Ahoana no fomba ampianarana tsy an-kijanona ny fianarana tsy tapaka amin'ny EFL sy mpianatra ESL
Nahoana no sarotra kokoa noho ny miresaka ny fanoratana?
Toro-làlana ho an'ny mpampianatra ESL
Beginner English Absolute - Some or Any
Allah (Andriamanitra) amin'ny finoana silamo
Isocolon: Lalàna momba ny fihenan-taona
Ahoana ny fikajiana ny fari-pahaizana manokana
Inona no mampifaly ny Comet?
Ny Asa Fanendrena Filoha dia mila ny fankatoavan'ny Antenimieram-pirenena
Fanontaniana mandoro: Torolalana ho an'ny "The Tyger" nataon'i William Blake
Inona no atao hoe fotoana? Fanazavana tsotra
Fahatakarana ny fiantraikan'ny trompetra roa eo amin'ny sekoly Amerikana
Politika Amerikana eo ambanin'ny George Washington
Ady Mangatsiaka: Lockheed F-104 Starfighter
Livia Drusilla - Emperora avy any Roma Julia Augusta aka Livia
Ahoana ny fomba hanoratana ny politika momba ny fanatrehana ny sekoly izay manatsara ny fanatrehana
Ny fomba famerenana ny Ben'ny Mpitsoka ny Mpitarika anao
Ny fahamboniana ao amin'ny Taoisme sy ny Bodisma
Ny Dokotera Brezhnev
University of Maine GPA, SAT sy ACT Data
Inona ny hafanan'ny hazavana ao Miles Miles?